Kusolwa ubugebengu kubulawa abawu-6 - Ilanga News
Home Izindaba Kusolwa ubugebengu kubulawa abawu-6
Kusolwa ubugebengu kubulawa abawu-6
Abanye babo kuthiwa bayanukeka ekudunweni kwezimoto
Mphathiseni Manyoni, oyingxenye yabadutshulwe ngoMgqibelo lapho kubulawe khona abantu abawu-6.
SEKUQUBUKE ingebhe emphakathini wasemijondolo yaseZamani kwa-Q, eMlazi, emuva kokuba ngoMgqibelo kudutshulwe kwabulawa abantu abawu-6.
Kulesi sigameko kubulawe uMnu Mphathiseni Manyoni, uNkz Xolisile Mzimela (30), uMnelisi Mbhele (15), uLindokuhle Madida, uLukhona Khumalo noLuyanda (esingatholakalanga isibongo sakhe).
Kubikwa ukuthi esinye isidumbu sitholwe buqamama nale mijondolo, sinenqwaba yamanxeba okudutshulwa.
ILANGA lihabule ukuthi kunezinsolo zokuthi abanye babafi bayasoleka emacaleni okudunwa kwezimoto.
Izolo ngeSonto ILANGA lihambele kule ndawo, lafika eminye yemindeni yabashonile isendaweni yesigameko, iyoqoqa izimpahla zababulewe njengoba bebehlala emiqashweni.
Kunelungu lomndeni ebelime eduze kwesihlabathi ebesigqibe igazi lapho kudutshulelwe khona uMnelisi (15), elivele lakhihla isililo.
Amalungu omphakathi abemi izixongololo emagcekeni, kusabhungwa ngalo lolu daba njengoba namaphoyisa abekhona exoxa namalungu emindeni.
Ilungu lomphakathi elikhulume neLANGA ngombandela wokuba lingadalulwa igama lalo ngoba lesaba ukuthi hleze abasocongi balenzakalise, lithe isigameko senzeke abantu abaningi bezivalele endlini njengoba bekumakhaza nemvula ina.
“Sithe sizihlalele endlini, sezwa kuqhuma isibhamu kaningana. Kudlule isikhashana sezwakala sesiqhuma ngasemgwaqweni. Sihlalile ngoba sesaba ukuphuma saze sezwa sekukhuluma abantu.
“Kungaleso sikhathi siphumile sazithela phezu komfanyana obedutshuliwe, eceleni kwakhe kukhona owesilisa yena obesethule vele.
“Amanye amalungu omphakathi aye ezindlini okuzwakale kuqhuma kuzona isibhamu, azithela esidunjini sikaManyoni nesentombi yakhe, (uNkz Mzimela) ebimvakashele.
“Kwenye indlu eseceleni kweyakhe, kutholakale enye intombazane ebisiphuthunyiswa esibhedlela kodwa uma sizwa kuthiwa ishonele khona,” kusho leli lungu lomphakathi.
Amanye amalungu omphakathi athe anovalo ngenxa yokuthi emasontweni ambalwa edlule, kuke kwadutshulwa umuntu eduze nayo le ndawo.
UMnu Bongani Mbhele onguninalume kaMnelisi obebonakala ukuthi usadidekile uthe umshana wakhe umfice esaphila, kodwa ebhonga.
Uthi abamzwile bathi ubememeza igama lakhe ethi makamsize.
“Uphuthunyiswe esibhedlela wafike washonela khona. Sibuhlungu ngento emehlele ngoba ubesafunda.
“Siyasola ukuthi uhlangane nalaba bantu ebuya ekhaya ngoba ubesezofika endlini.”
UMnu Sifanele Myeni ongumfowabo kaMphathiseni, uthe bona bathole ucingo bebikelwa ngalesi sigameko, bafika umfowabo nentombi yakhe sebeshonile.
“Akukho okubi engimazela khona, ubengumuntu ozithulelayo futhi ebakhonzile abantu. Akukho ake wasitshela ukuthi uxabene naye, yingakho sisadidekile ukuthi ngabe ubenzeni,” kusho yena.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uBrigadier Jay Naicker, uthe kuvulwe amacala okubulala, kanti kusolwa ukuthi imbangela yokubulawa kwabo ihlobene nobugebengu.
Previous articleUfuna amalobolo emuva kokuxabana nomkhwekazi
Next articleOwoKhozi FM uqokelwe kowezindondo